उमेर बढेसंगै एक्लै रहने ईच्छापनि घट्ने, कारण यस्तो छ « Light Nepal
उमेर बढेसंगै एक्लै रहने ईच्छापनि घट्ने, कारण यस्तो छ
Published On :9February, 2019 11:49 am
काठमाडौं, माघ २६ । मानिस सामाजिक प्राणी हो । सामाजिक प्राणी भएकै कारण समाजमा बाँच्नको लागि मानिसलाई साहाराको जरुरत पर्छ । जन्मसँगै जब बचपनका पाइलाहरु अगाडि बढ्न थाल्छन् तब देखि मानिसहरु साथी खोज्न थाल्छन् । बच्चादेखि नै एक अर्काका साथी बन्न सुरु गर्छन् त्यसपछि विस्तारै सबैभन्दा मिल्ने साथीको खोजीमा लाग्छन् र आफ्नो समय र उर्जा असल जीवनसाथीको खोजीमा लगाउँछन् ।
सामाजिक परम्परा जगाइराख्न मात्र नभई हर कोहिलाई कसै न कसैको आवश्यकता पर्ने प्राकृतिक नियम नै हो । त्यसैले प्राकृतिक र सामाजिक परम्परालाई अस्वीकार गरेर एक्लै जीवन बिताउनु हरेकका लागि सम्भव हुदैँन । यसै क्रममा एक्लै जीवन बिताउने कि जीवनसाथीको साथमा ? भन्ने सवालमा आधारित भएर गरिएको एक अनुसन्धान गरिएको छ । कस्तो हुन्छ ‘सिंगल’ मानिसको जीवन समय सँगसँगै मानिसको सोचमा पनि परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । विस्तारै हाम्रा समाजका धारणाहरु पनि विकसित हुँदै गइरहेका छन् ।
त्यसैले यदि कुनै व्यक्तिले जीवन एक्लै बिताउँछु भन्ने फैसला गरेको खण्डमा पनि जीवनसाथी खोज्न दवाव दिइँदैन । तर, जो व्यक्ति एक्लै रहन चाहान्छ ती व्यक्तिप्रति मानिसहरुको उत्सुकता र दया जोडिएको हुन्छ । मानिसहरु एक्लै जीवन बिताउँने मानिसहरुलाई अलग्गै सोच्छन् । भने, आमाबुबा सधैँ आफ्नो सन्तानको कुशलतालाई लिएर चिन्तित रहने गर्छन् । आफन्तहरु पनि उनीहरुलाई जोडी खोज्नका लागि हजार कोशिस गरिरहन्छन् तर, जब मानिसले एक्लै बस्ने संकल्प गर्छ तब उसका लागि एक्लै बस्न बानी पर्दै जान्छ ।
उमेर बढेपछि ‘सिंंगल’ रहने चाहाना बढी जर्मन सेन्टर अफ गेरोन्टोलोजीका स्कोलर्सद्वारा गरिएको एक अनुसन्धानले उमेर बढेसँगै एक्लै जीवन बिताउनुमा सन्तुष्टि मिल्ने र वैवाहिक जीवनप्रतिको उत्सुकता घट्दै जाने बताएको छ । अनुसन्धान एनी बोगर र ओलिवर हक्स्फोल्डले जर्मन एजिङ सर्वेद्वारा उपलब्ध गराइएको डाटामा आधारित भएर यो अध्ययन गरेका थिए । यस अध्ययनका लागि ४० देखि ८५ सालका व्यक्तिहरुलाई सन् १९९६ देखि २०१४ सम्म सामेल गरिएको थियो ।
जसमा २५५२ जना मानिसहरु सहभागी थिए । उनीहरुलाई २००८ मा पुनः २०१४ मा आधारित भएर अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । रोमान्टिक जोडीको सम्बन्धमा गिरावट यो अनुसन्धानले पत्ता लगाएअनुसार सिंगल मानिसहरु उमेर बढे पनि सन्तुष्टिको अनुभव गरिरहेका थिए तर सम्बन्धमा रहेका मानिसहरु आफ्नो सम्बन्धमा मिठास नभएकोले दुखी थिए ।
कुनै कुनै जोडीको जीवन सुरुवाती दिनहरुमा उदाहरणीय थियो तर विस्तारै सम्बन्धमा आएको उतारचढावका कारण सम्बन्धमा तित्तता बढेको र जीवनप्रति नै निराशा छाएको पाइयो । ‘सिंगल’मा भन्दा सम्बन्धमा रहनेमा एक्लोपनको अनुभव धेरै सम्बन्धमा रहने र एक्लै रहनेहरुले एक्लोपनको विषयमा फरकफरक अनुभव सुनाए । अध्ययनका अनुसार जो मासिनहरु एक्लै बाँचिरहेका थिए ती व्यक्तिलाई एक्लोपनको अनुभव नहुने र उमेर बढ्दै गएपनि एक्लो अनुभव नहुने पाइयो ।
तर जुन मानिसहरु विवाहपछि लामो समय जोडीका साथ विताएका थिए । र, पार्टनरको मृत्यु भएपछि वा सम्बन्धमा आएको खटपटका कारण धेरै नै एक्लोपनको अनुभव गरिरहेका थिए । के हो त कारण ? यस अध्ययनले वैज्ञानिक कारण उल्लेख नगरेपनि अध्ययनमा उपलब्ध डाटाका अनुसार सिंगल व्यक्तिले जीवन सन्तुष्टिका साथ विताइरहेको पाइयो । एक्लै बस्नेहरुमा सहनशीलता बढ्दै जाने र आफूजस्तै एक्लै सफल भएका मानिसहरुलाई हेरेर आफूप्रति विश्वास जाग्ने भएकाले उनीहरुलाई जीवनमा एक्लो हुनुमा कुनै पनि अपसोस हुँदैन ।
एजेन्सी । चीनको हुनान प्रान्तमा प्रहरीले एक चोरलाई भाग्ने क्रममा पक्राउ गरेको भिडियो भाइरल भइरहेको
भारतका यी बालक जस्ले आफ्नो साईकलले किचेको चल्ला र पैसा बोकेर अस्पताल पुगे
भारत, चैत २१ । भारत मिजोरम राज्यका एक बालकको साइकलले दुर्घटनाबस कुखुराको एउटा चल्ला किच्यो
काठमाडौं, चैत १७ । बैबाहिक जीवन सुरु गर्दै हुनुहुन्छ रु तपाइँले हरेक पाटाका बारे जानकारी